Home >> chrome claims zimbabwe
Battle lines drawn over Zimbabwe chrome claims ...
ON Saturday July 1, 2017 the Zimbabwe Mining and Smelting Company (Zimasco), the country's biggest ferrochrome producer, will officially surrender 22 700 hectares of chrome-rich claims to ...
Chrome miners blame woes on ousted Machaya - NewsDay Zimbabwe
· CHROME miners yesterday told Parliament that former Midlands Provincial Affairs minister Jason Machaya interfered a lot in the issuance of chrome claims …
· Zimbabwe Alloys officials would not say whether they had also given up some of the company's claims. Zimbabwe holds more than 950 million in chrome reserves, according to ministry of mines data. In 2014 Zimbabwe produced 260,000 tonnes of high-carbon ferrochrome, which was 2.3 …
· Zimbabwe Alloys officials would not say whether they had also given up some of the company's claims. Zimbabwe holds more than 950 million in chrome reserves, according to ministry of mines data. In 2014 Zimbabwe produced 260,000 tonnes of high-carbon ferrochrome, which was 2.3 percent of global output.
· Gustav talking to a Geologist at Neil's mine overlooking Global Chrome claims: Posted by Recap Mining Zimbabwe at
· HARARE (Reuters) – China's Sinosteel Corp Ltd's business in Zimbabwe has ceded half its mining claims to the government, complying with Harare's demands to chrome producers to give up some of their claims, a company official said on Tuesday. The Southern African nation holds the world's second largest deposits of chrome…
· A boom in the international price of chrome has seen foreign companies scrambling for chrome claims in the country, Standardbusiness has learnt. The ministry of Mines is currently clogged by enquiries from prospective investors in the chrome sector, deputy minister Fred Moyo said last …
Zimbabwe's federation of small-scale miners says the government should consider re-allocating chrome claims along the country's Great Dyke in a manner that should result in a shareholding. Zimbabwe Chrome Miners Relinquish Some Licenses to Government . 07-12-2016· The mining licenses, known as claims, have been allocated to small-scale ...
· Zimbabwe anticipates chrome ore production to double this year to 550 000 tonnes from 284 943 tonnes last year. Ferrochrome output is also expected to increase to 300 000 tonnes, up from 149 000 tonnes. "We are going to promote producers by giving them claims so that they can meet own requirements of ore from the mining operations.
· South Africa's Tharisa strengthened its claim as an early mover in a hoped-for Zimbabwean mining renaissance on Wednesday by buying a slice of the chrome-rich Great Dyke region. Zimbabwe has ...
Scramble for chrome claims | The Chronicle
A SCRAMBLE for chrome mining claims has ensued in the Midlands province with small scale miners accusing Government mining officials of sidelining them in the allocation of claims recently ceded ...
Zimasco in claims scandal | The Herald
Over 80 percent of chrome mining claims ceded to Government by giant ferro chrome producer, Zimbabwe Mining and Smelting Company (Zimasco), have been exploited, while some are …
The Chamber of Mines of Zimbabwe (COMZ) is a private sector voluntary organization established in 1939 by an Act of Parliament. The members include mining companies, suppliers of machinery, spare parts, and chemicals, service providers including banks, insurance companies, consulting engineers, …
Chrome Mining Claims for Sale in Zimbabwe
Chrome Mining Claims for Sale in Zimbabwe along the Great Dyke region. 760, 000 tons available across 70 Hectares. Geological reports include: 1. Mines and Minerals Act - Certificate of Registration 2. Geological Map of registered claims authenticated by the Ministry of Mines 3. Geological Report of the claims compiled by an official currently working at the Ministry of Mines Claim Details ...
In Zimbabwe, the availability of chrome ore reserves, most of which would be produced by open-cast mining, with a high Cr/Fe ratio, should have attracted a smelting capacity increase. Despite the better quality and high quantity of chrome ores/reserves, Zimbabwe …
HARARE - Zimbabwe is planning to export over 800 000 tonnes of chrome this year, following the country's move to re-distribute land previously held by miners. Mines minister Walter Chidakwa yesterday said government was moving to re-allocate 21 170 hectares (ha) of land that once belonged to the country's biggest chrome …
· A boom in the international price of chrome has seen foreign companies scrambling for chrome claims in the country, Standardbusiness has learnt. The ministry of Mines is currently clogged by enquiries from prospective investors in the chrome …
Zimbabwe considers new chrome ore ban, source claims ...
Zimbabwe considers new chrome ore ban, source claims The Zimbabwean government is considering banning chrome ore exports from late April, understands. The Mineral Marketing Council of Zambia is expected to make an announcement soon, a well-placed source told .
· Govt redistributing Zimasco chrome claims Ndakaziva Majaka • 16 June 2017 11:33AM • 0 comments HARARE – Government has started re-distributing idle chrome mines surrendered by the Kwekwe-based Zimbabwe Iron and Smelting Company (Zimasco) amid indications that illegal miners who had occupied them would be evicted.
HARARE (Reuters) – China's Sinosteel Corp Ltd's business in Zimbabwe has ceded half its mining claims to the government, complying with Harare's demands to chrome producers to give up some of their claims, a company official said on Tuesday. The Southern African nation holds the world's ...
Sinosteel cedes half its chrome claims in Zimbabwe to state
· China's Sinosteel Corp Ltd's business in Zimbabwe has ceded half its mining claims to the government, complying with Harare's demands to chrome producers to give up some of their claims, a company official said on Tuesday. The Southern African nation holds the world's second largest
Zimbabwe asks chrome producers to cede mining claims ...
· Zimbabwe has asked two ferrochrome producers, including a unit of China's Sinosteel Corp Ltd, who own 80 percent of all chrome mining claims to release some ground for distribution to new investors, the mines minister said on Wednesday.
Govt redistributing Zimasco chrome claims – Nehanda Radio
In re-distributing the claims, 5 746 ha will go to the Zimbabwe Geological Survey while 7 000ha will go towards medium scale beneficiation plants and new smelters. ... Zimbabwe's 2017 chrome ...
Zimbabwe's raw chrome exports amounted to 284 943 tonnes last year, generated a mere $31 million against 149 131 tonnes of high carbon ferrochrome, which earned the country $115 million.
Scramble for chrome claims - Zimbabwe Today
A SCRAMBLE for chrome mining claims has ensued in the Midlands province with small scale miners accusing Government mining officials of sidelining them in the allocation of claims recently ceded by Zimasco and ZimAlloys. The two mining firms ceded over half of their mining claims to the State in ...
zimbabwe china mining assistance programbentonite processing plant manufacturer